Kedu ka esi eto cactus n'ụlọ - Fatịlaịza - 2019
Cacti na-aghọwanye ihe na-ewu ewu maka ịmalite n'ụlọ. Osisi ahụ adịghị mma na nlekọta ma na-eguzogide mmiri ozuzo, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchefu ịṅụ mmiri, cactus ahụ agaghị enwe ahụ iru ala.
Ịhọrọ ebe maka cactus
Ịhọrọ akpu cactus
Ihe: ụrọ ma ọ bụ plastic
Ịkụ osisi na transplanting
Fatịlaịza na mgbakwasa
Ìhè na okpomọkụ
Otu esi choputa cactus
Enwere ọtụtụ ndị na-eto eto na osisi kachasị mma maka osisi ime ụlọ.
Echinopsis bụ cactus na-agbanwe agbanwe bụ nke ụmụaka na-emepụta nke ọma. Nke a bụ ụdị ihe ọkụkụ.
Cereus - akwa cactus nke nwere ọtụtụ agba agba, na ogwe isi na-etolite ọtụtụ akụkụ. Osisi ahụ anaghị eme ntoju, na-ebugharị site na osisi ma ọ bụ cuttings.
Robusta ugwo ubochi bu ihe cactus nke nwere okpukpu obi na elongated bristles, o na-eto ngwa ngwa ma rute oke nha. Na-akwalite site na cuttings.
Mummily - cactus na-anabata enweghị mmiri, nke na-enweghị atụ, ọ bụghị nke ahụ. Blooming mma hey.
Phyllocactus bụ osisi a na-ede akwụkwọ, nke, Otú ọ dị, enweghị akwụkwọ akwụkwọ, akwukwo yiri ogwe nke cactus. Cactus nwere nlekọta kwesịrị ekwesị n'ime ụlọ na-eji okooko osisi buru ibu.
Ịhọrọ ụdị dị iche iche na-amasị gị, ṅaa ntị na ọdịdị nke osisi ahụ: ekwesịrị ka ọ ghara imebi ya. Leleekwa maka ụmụ ahụhụ ma ọ bụ enyo stains. Lelee anya na ndi na ere ere na ulo ahia.
Ọ dị mkpa ịghọta otú e si eto cactus n'ụlọ, ebe ebe osisi dị mma. Ndị na-azụ ihe na-ekewa cacti n'ime nnukwu ìgwè abụọ: ọzara na oke ọhịa.
Osisi desert bụ ihe ndị ọzọ dị na windo nke dị n'ebe ndịda, ha hụrụ ụcha anwụ.
Forest cacti na-enwekwu ntụsara ahụ na windo dị n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ugwu, ìhè anyanwụ na-enwu ọkụ nwere ike ịgba ọkụ.
Uzo ha di n'otu bu eziokwu na onyinyo zuru oke na-emetuta ha. Na ndo cacti deform ma ghara ifuru, ma ọ bụrụ na ha bụ okooko, ma nwedịrị ike nwụọ. Site na mmiri ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ, ruo oge fọdụrụ, cactus nwere ike ịnọ na mbara ihu, n'èzí.
Tupu ị kụọ cactus n'ime ite, ọ dị mkpa iji chọpụta ikike maka ya. A ghaghị ịhọrọ oke nke ite ahụ, jiri àgwà nke ụdị ahụ mee ihe.
Ị ma? Ndị na-eme omenala ndị Mexico na-eji mgbọrọgwụ nke Lophophora williamsii cactus na-akwadebe ihe ọṅụṅụ nke na-ewebata ọnọdụ steeti. Ọnọdụ hallucinogenic nke osisi ahụ bụ n'ihi ọnụnọ nke alkaloid mescaline. Ndị Indians nke Mexico ji cactus a dị ka ihe aneseti.
Olu nke tank ekwesịghị ịbụ ihe karịrị usoro mgbọrọgwụ gbasaa nke osisi ahụ. Cactus Ariokarpus chọrọ ọkwa miri emi, na ụfụ - na nnukwu olu, n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ụmụ. Ogo na olu nke ite na-adabere n'otú na ọdịdị nke usoro mgbọrọgwụ nke osisi ahụ. Maka mgbọrọgwụ nke mkpụmkpụ dị ntakịrị ma dị mkpa mkpa nnukwu ite, obere mgbọrọgwụ - dị omimi na miri.
Cactus dabara na plastik, na ụrọ, ọ dịghị atụ aro ka eji otu ite.
Ụdị ite ahụ maka osisi ahụ adịghị mkpa. Ma maka nkwekọrịta nke onwe gị, ọ ka mma ịzụta akpa ma ọ bụ akụkụ anọ - nke a ga-echekwa ohere na nnukwu osisi.
Na ala nke tank ị kwesịrị itinye akwa drainage - nke a dị mkpa na nlekọta cacti n'ụlọ. Ị nwere ike iji obere ájá ma ọ bụ obere akpa mmiri. E kewara ihe ndị na-adọkpụ n'ime ụzọ abụọ: a na-etinye otu n'ime ala, nke abụọ - mgbe a dasịrị ala n'elu.
A na-ahọrọ ihe kachasị mma nke ala a n'otu n'otu. Cacti mgbe ọ dị obere bụ ala dị mma na-adịghị ọcha lime, ndị toro eto - peat. Dị ka akụkụ nke ala maka osisi prickly, ọ bụ ihe na-achọsi ike iji ahịhịa, soddy ala na ájá. Udị ala na-adabere na ahụike nke usoro mgbọrọgwụ nke osisi ahụ, na nnukwu agwakọta na mmiri dị arọ, mmiri ga-edozi, na-eduga ná ntụgharị nke mgbọrọgwụ.
Mmasị A na-azọpụta Cacti ọtụtụ ugboro site na akpịrị ịkpọ nkụ nke ndị njem furu n'ọzara. Nke a bụ tank mmiri. Usoro mgbọrọgwụ nke osisi ahụ na-emepụta mmiri na "akpati" ma na-echekwa ya n'ụdị oké sirop. Enwere ike inweta mmiri site na ịkọ akpụkpọ anụ ahụ.
Tụlee otú e si eji cactus transplant mgbe ịzụrụ. Ọ ka mma ịzụta osisi na mmiri, dị ka oge kachasị mma maka ịkụ na transplanting bụ April-May. Jiri nlezianya wepụ mkpụrụ nke osisi a zụrụ site na ite ahụ, kpochapụ ya n'ala. Osisi mgbọrọgwụ kwesịrị ijide nkeji iri abụọ na ngwọta nke potassium permanganate. Mgbe ahụ kpoo nke ọma. Site na ala ochie ka mma iji kpochapụ. Debe ala ala n'elu drainage oyi akwa, gbanwee mgbọrọgwụ, fesaa ya na ala ma gwuo egwu. Mmiri osisi ahụ ma chere ruo mgbe ala dịtụla nwayọọ, tinyekwuo ala na n'elu oyi akwa. Ndị na-eto eto na Novice na-eche ma ọ dị mkpa ịghapụta cactus mgbe ị zụrụ? N'ụlọ ahịa, a na-ahụkarị cacti na peat. Enweghị mgbakwunye nke ala turf, peat ga-ejigide mmiri dị ukwuu, nke a na-emebi usoro mgbọrọgwụ nke osisi ahụ. A na-emepụta ọtụtụ ụdị cacti kwa afọ abụọ, a na-edozi akụkụ ndị ọzọ nke usoro ahụ n'afọ atọ ọ bụla. Mgbe a na-akwanyere ùgwù, a na-ebugharị cacti na ala. Mgbe a na-atụgharị ya, a gbanwere ite ahụ gaa buru ibu ma ọ bụ n'obosara.
Ka anyị chọpụta otú ị ga-esi na-aṅụ cactus n'ụlọ. Ugboro ugboro na-achọ osisi ndị dị na ebe dị ọkụ ma na-ekpo ọkụ. N'oge okpomọkụ, cacti kwesịrị ka a ṅụọ mmiri otu ugboro n'ụbọchị. Osisi dị na obere ite dị mkpa ka a na-atụgharị ya, na ụbọchị igwe ojii anaghị eji mmiri eme ihe. Maka ịta cacti eji sie mmiri, ọkacha mma na ụlọ okpomọkụ.
Ọ dị mkpa! Mmiri si na mgbata nwere ọtụtụ nnu calcium nke na-egbochi mmepe zuru oke nke cacti.
N'oge mgbụsị akwụkwọ, ọnụọgụgụ mmiri na-ebelata, mmiri dị ka ala dries. Otu ihe a na-emetụta oge fọdụrụ. Na oyi, cacti chọrọ ezigbo ọkụ na okpomọkụ adịghị ala karịa ogo ise ma ọ bụghị elu karịa ogo iri. Ịgbara oyi maka osisi na-eto eto - otu ugboro n'ọnwa, maka ndị okenye - ihe dị ka okpukpu abụọ n'oge oyi.
Maka fertilizing cacti ọ ka mma iji ọgwụ mmiri mmiri mee ihe. Uwe ndị a nwere ihe niile bara uru dị mkpa maka osisi ahụ, na-ahụ ma ọganihu na mmepe. A na-emepụta cactus ugboro abụọ: tupu e guzobe buds na n'oge okooko.
Site na March ruo October, a na-emepụta cacti ọhịa n'otu ugboro n'izu (10 ml nke nkwadebe kwa liter nke mmiri). Maka cacti desert na-eme ka ọgwụ ọjọọ dị ala (5 ml kwa lita abụọ). N'oge oyi, etinyela aka na mgbakwasa elu.
Ịgba ọkụ na mmepe nke cacti na-arụ nnukwu ọrụ. Ndị a bụ osisi na-ahụ maka anyanwu, ihe dị n'ime ha ga-abụ nke ọma nke ọma n'ụbọchị. Osisi ahụ na-eto eto na windo nke dị n'ebe ugwu ga-enwupụta ìhè. LMgbe enwere uzuzu buru ibu, karia n'ime ime obodo, cacti kwesiri ka echedo ya na ihe nkiri dome. Ndị na-eto eto adịghị etinye ìhè anyanwụ kpọmkwem: ogige ndị na-adọrọ adọrọ na shea ga-ere ọkụ.
Ntị! Mmiri ihu igwe bụ ọnọdụ okike maka cactus na ọdịdị. Maka ime ụlọ, okpomọkụ n'elu 35 ° C ebibi.
Cacti bụ ihe dị iche iche na mma ụlọ ha, nchịkọta ha na nlekọta ọzọ agaghị ewe oge buru ibu ma ọ gaghị achọ ọtụtụ nkà. Okooko osisi na-adịghị adịkarị cactus okooko na-ejikarị ịma mma nke osisi okooko osisi ornamental mgbe nile.
Kedu uru na nsogbu nke kabeeji Romanesco
Kedu ka esi tụgharịa ihe ọṅụṅụ karọt n'oge oyi
Iche iche nke nduku "Krasa": àgwà, cultivation agrotechnology
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Anyị na-akụ ma na-elekọta cactus n'ụzọ ziri ezi